कलाकारको लाश राख्ने ठाउँ पनि छैन :सरिता लामिछाने
बिहीबार चावहिलस्थित आफ्नै निवासमा अन्तर्वार्ता दिँदै सरिता लामिछाने	| तस्वीर:रिवाज राई
काठमाडौं, जेठ २४ : चर्चित टेलिफिल्म मुक्तिबाट कलाकारितामा प्रवेश गरेकी सरिता लामिछाने पर्सि (जेठ २५) हुन लागेको चलचित्र कलाकार संघको चुनावमा अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्।
लामिछानेले अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी रवीन्द्र खड्कालाई चुनावमा हराइन् भने चलचित्र कलाकार संघले १८ वर्षपछि फेरि महिला नेतृत्व पाउनेछ।यसअघि ख्यातिप्राप्त कलाकार वसुन्धरा भुषाल संघकी अध्यक्ष थिइन्।
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि लामिछानेलाई गैरकलाकार भएर पनि कलाकार संघको अध्यक्ष बन्न खोजेको आक्षेप लागेको थियो। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं प्रेसले उनीसँग गरेको अन्तर्वार्ता–
काठमाडौं प्रेस : चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन?
सरिता लामिछाने : यसअघि म चलचित्र कलाकार संघकी महासचिव थिएँ। महासचिव हुँदा संघको नेतृत्वमा बसेर गर्न सकिने दुई चार वटा कामको सम्भावना देखेँ। त्यही भएर अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी हुँ।
अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भयो भने के गर्नुहुन्छ?
कलाकार संघको आफ्नै भवन हुनुपर्छ भन्ने सबैको सोच र चाहना रहँदै आएको छ। तर, अहिलेसम्म कलाकार संघको आफ्नै घर बन्नै सकेन। अध्यक्ष निर्वाचित भएँ भने कलाकार संघको आफ्नै भवन बनाउन सक्छु भन्ने मेरो विश्वास छ।
कलाकार संघको आफ्नै भवन वा घर हुनु किन जरूरी छ?
राष्ट्रले सम्मान गरेको, पहिचान दिएको कलाकारको निधन हुँदा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उनको पार्थिव शरीर राख्ने ठाउँ पनि हामीसँग छैन। कलाकार संघको आफ्नै भवन भयो भने कलाकारको पार्थिव शरीरलाई त्यहाँ श्रद्धाञ्जलिका लागि राख्न सकिन्छ।
कलाकारकै लागि भनेर सरकारले अहिलेसम्म एकेडेमी बनाएको छैन। हामी कलाकारले कला सिक्ने, कलाकारको प्रतिभा निखार्न मद्दत गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन।
सरिता लामिछाने कलाकार हैनन् भन्ने आक्षेप पनि तपाईंमाथि लाग्यो। के भन्नुहुन्छ?
वीस बर्ष लामो करिअरमा मैले कहिल्यै कुनै चोट भोगेकी थिइनँ। यसपालि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएपछि भने यस्तो चोट पर्‍यो। सरिता लामिछाने कलाकार हैनन्, सरिता लामिछाने गैरकलाकार हुन्, सरिता लामिछानेको सदस्यता खारेज गर्नुपर्छ, सरिता लामिछाने संघमा अध्यक्ष हुन लायक छैन भन्नेजस्ता आरोप लाग्दा निकै दुःख लाग्यो।
म आफैं सोच्न बाध्य भएँ – के म साँच्चै गैरकलाकार हुँ त? त्यसले मलाई मानसिक रूपमा नकारात्मक असर पार्‍यो। तर, मैले विस्तारै सहज रूपमा लिए। जीवनमा उतारचढाव हुन्छ भन्दै मन बुझाएँ। म कलाकार नै हुँ किनभने कलाकारिताभन्दा अर्को क्षेत्र र अभिनयभन्दा अर्को पेशा मेरो छैन भन्दै निष्कर्ष निकालेँ।
महासचिव हुँदा चाहिँ तपाईं कलाकार नभएको आरोप लागेन, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा चाहिँ किन यस्तो आरोप लाग्यो?
म पनि अच्चम्मित छु। महासचिव भएर उम्मेदवारी दिँदा र तीन वर्ष महासचिवको कार्यभार सम्हाल्दा ममाथि कहिल्यै यस्तो आरोप लागेन। त्यतिबेलै यस्तो बाधा उत्पन्न भएको भए म अझ पक्का हुन्थेँ होला। खै, अध्यक्ष पद नै त्यस्तो हो कि !
वसु दिदी (वसुन्धरा भुषाल) अध्यक्ष हुनुभएको १८ वर्षपछि एउटी महिला कलाकारले त्यही पदमा उम्मेवारी दिँदा यति ठूलो हङ्गामा किन? कतै म महिला भएरै पो हो कि! महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएकोले पो हो कि!
१८ वर्षपछि फेरि चलचित्र कलाकार संघको नेतृत्वमा महिला पुग्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
कोशिस जारी छ। चुनावलााई मैले युद्धको रुपमा लिएको छैन। म नियम, कानून र प्रक्रियामै बसेर अघि बढिरहेकी छु। अघि बढ्नेलाई खुट्टा तान्ने रहेछ। तर, म आशावादी छु।
कलाकार संघले सशक्त रुपमा काम गर्न नसक्नुको कारण के हो?
हुन त म आफैं पनि संघमा छु। सायद कमजोरी हामीमै होला। कलाकारको हकहित र समस्या सुन्न र सुल्झाउन बसिसकेपछि संघले पनि धेरैभन्दा धेरै कलाकारलाई समेट्नु पर्छ। र, संघ कहाँ छ भनेर खोजी गर्ने दायित्व नयाँ कलाकारको पनि हुन्छ।
नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई संघबारे कति थाहा छ?
संघमा पछिल्लो पुस्ताका धेरै कलाकरहरू आबद्घ हुनुहुन्न। महासचिव पदमा रहँदा मैले पछिल्लो पुस्ताका केही कलाकारलाई आवद्ध गराइसकेको छु। संघमा पछिल्लो पुस्तालाई पनि समेट्ने हो भने यसको नेतृत्व गर्नेहरु बलियो र सक्षम हुनुपर्छ।
चुनाव आइसक्यो, तयारी कस्तो छ?
दुई दिनअघिसम्म पनि म कलाकार हुँ भन्ने प्रमाण पेश गर्ने दौडधुपमै थिएँ। मैले पहिले पनि भनिसकेँ, चुनावलाई युद्धको रुपमा लिएकी छैन। संघका लागि केही गर्छु भनेर अघि बढेको छु। यसमा साथ दिनुहोस् भन्ने अनुरोध छ मेरो।
Published Date: Thursday, 6th June 19:53:15 PM